तिमी नभएको बेला छोरीलाई क’रणी गरे, मेरो ग’ल्ति भयो, मलाई जे*लबाट छुटाउ भन्दै का’रागार बाटै श्रीमतीलाई फोन (भिडियो) – Life Nepali
तिमी नभएको बेला छोरीलाई क’रणी गरे, मेरो ग’ल्ति भयो, मलाई जे*लबाट छुटाउ भन्दै का’रागार बाटै श्रीमतीलाई फोन (भिडियो)
आफ्नै १७ वर्षकी छोरीलाई बा’रम्बार यौ’*न शो*’षण गर्ने बुवाले प्रहरी हिरासतवाट आफ्नो श्रीमतीलाई फोन गरेका छन् । उनले आफुले ग*ल्ती स्वी*कार गर्दै, एक पटक मा,फि दिन आग्र,ह, सहित बारम्बार, श्रीमतीलाई फोन, गर्ने गरेका छन् । आफ्नै छोरीलाई क,रणी गर्ने ,श्रीमानलाई, प्रहरी हिरासतमा, पठाएकी, श्रीमती अहिले छोरीको ,न्यायका लागि मिडिया गु,हार्दै हि,डेकी छन् । आफुले गरेको ,क,र्तुतका का,रण, प्रहरी हिरासतमा, पुगे पछि ति पुरु,षले, श्रीमतीलाई, फोन गरेर फकाइरहेका छन् ।
प्रहरी हिरासतमा बसेका मेरा श्रीमानलाई, कसले फोन दिन्छ, मलाई, बारम्बार फोन गरेर ,मलाई भेट्न ,आइज, भनिरहेका छन्, उनले रुँ,दै भनिन्, ग,ल्ती स्वी,कार गरेपछि, मात्र म भे,ट्न जान्छु । उनले श्रीमानले, पटक, पटक फोन गरेर आफुलाई, भेट्नबोलाएका, का,रण अब, के गर्ने भन्ने, निर्णय, गर्न नसकेको बताएकी छन् । आफुलाई बिवाह गरेर ल्याएपछि, पनि बारम्बार, सौ,ता ल्या,इरहँदा पनि सहेर, बसेको, बताएकी उनले छोरी, मा,थि गरे,को अत्या,चार सा,मु भने नझुक्ने बताएकी छन् । उनले आफ्ना श्रीमान स्थानिय, नेता पनि भएको बताएकी छन् ।
मिडियाकर्मी,संग अन्तर,वार्ता दिँदै गर्दा, पनि उनलाई श्रीमानको, फोन आएको थियो । उनले फोनमा तिमीले गरेको त्यो गलत काम स्वीकार गर्ने की नगर्ने भनेर सोधिरहेकी थिइन् । तिमीले स्वीकार गरेपछि मात्र म तिमीलाई, भेट्न आउँछु भन्दै थिइन् फोनमा । उनले फोनमा, म पापी हुँ,, मलाई कारागारमा कुहिने अवस्थामा नराख, अरु, छोराछोरीसंग भेट्ने वातावरण बनाइदेउ भन्दै फकाएको, उनले बताइन् । मैले गल्ती, गरेको छैन, भन्दिन तर मलाई, एक पटक माफी देउ भन्दै श्रीमतीलाई फकाएका छन् ।
एक्लै दु”ख गरेर पाँच,वटा छोराछोरी हु,र्काएकी ति, आमालाई, आफ्नै श्रीमानले, छोरी माथि यस्तो, दृष्टि, लगाउलान्, भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनन् । आफुलाई माया त कहिल्यै, गरेनन्, बारम्बार ,सौ,ता ल्या,इरहन्थे यिनी ,छोराछोरीको अनुहार हेरेर बस्दै आएकी ,आमा माथि, अहिले सहनै नसक्ने पी,डा थपिएको, छ । उनले त्यसरी, आफ्नै छोरी माथि कुदृष्टि लगाउने श्रीमानलाई ,जन्म, कै,दको, मा,ग राखेकी छन् ।
Previous पारस सरकारले पि’ट्नु’भयो भन्दै सोनिका रोकाया मिडियामा आइन ! यस्तो छ का’रण ?
Next पैसा चो’रेर र’क्सि खाएको रि’समा बुवाले आमाको ज्या’न लिएपछि, तीन छोरीको बिच’ल्ली भिडियो